Mombasa oo laga badbaadiyay weerar argagaxisonimo. | stn radio	Friday, November 28th, 2014	Home
Mombasa oo laga badbaadiyay weerar argagaxisonimo.
Jan 3, 2013 - Aragtiyood	Saraakiisha wadanka Kenya ayaa sheegay in ay kuu guulaysteen fashilinta weeraro argagexiso oo lala damacsana in laga fuliyo magaala xeebedka Mombasa ee wadanka Kenya kaasi oo lasoo qorshenayay inta
Saraakiisha wadanka Kenya ayaa sheegay in ay kuu guulaysteen fashilinta weeraro argagexiso oo lala damacsana in laga fuliyo magaala xeebedka Mombasa ee wadanka Kenya kaasi oo lasoo qorshenayay inta lagu guda jiro maal maha ciida kirismiska.
Taliyaha booliska magaladasi Aggrey Adoli aya shegay in ay gacanta ku dhigeen koox Soomaali ah oo si dhuumalaysi ah uga soo gudubtay soodinta Kenya ay la wadaagto wadanka Somalia.
Taliyaha ayaa u shegay saxafada in shacabka wadanka Kenya laga doonayo in ay fajignaadaan inta ay soconyaan dabaal dagyada iida kirismiska.
Mombasa waa maagalada 2-ad ee ugu weyn wadankaasi Kenya oo dhaqaalo badan ay kasoo gasho dawlada Kenya waxa ay ragaadiyay qaraxyo bam iyo sidoo kale weerar afduub ah oo loo geesanayo dalka gaar ahaan halka ay u dalxiis tagaan dadka.
Waxa si aad ah loo adkeeyay goobaha muhiimka ah ee magalada Mombasa waxana uu taliyaha shegay in la dhigay booliska farabadan.
“Waxaan si aad ah u xoojinyay hotelada goobaha dadka shacabka wadanka isugu yimaadan iyo sido kale kaaniisanada wadankasi” sidasi waxa shegay adoli taliyaha ciidamada boliska Mombasa inta lagu guda jiro ciida kirismiska.
Taliyaha aya ka digay weerar ay koxda al-shabab ay ku qorshenayaa in ta lagu guda jiro mal mahasi ay weeraro ka gesan karaan wadankasi waxana uu shaca ka qaday in ciidamada amanka wadanka Kenya ay ku jiraan fejignan midi ugu balarned.
Weerarada ka dhaca wadankasi Kenya ayaa waxa ay dawlada dusha kaga turtay masuuliyadeeda xarakada al-shabab ee Somalia.
xafiiska wararka idaacada STN ee kenya